Qaybtii Lixaad waxay inoo joogtay Salma oo markii u horeysay warqad ka heshay Subeer Tan iyo intii ay Jarmalka Timid, waxaynay gashay qolkeegii oo ay ku fadhiisatay sariirteedii, ka dibna warqadii ayay biloowday inay akhrido warqadiina waxay ku bilaabantay sidan:
wallaal, waxan u malaynayaa in aynu kala maqnayn muddo aad u badan waxa kale oo aan ogahay in aan u boholyoobay wada hadalkeenii wada joogeenii iyo wejigaagii furnaa.
Waan ogahay oo halka aad maanta joogtaa ama aad maanta taalaa waa meesha aan u malaynayo in aad ku dhamaysanayso noloshaada mana hilmaansani in aad tahay xaas, laakiin haygula yaabin qoraalka ama dhambaalka xambaarsan hadalada kala duwan kuwaasoo isugu jira waano, dardaaran, waxa isu sheegid.
Haddaba, Salma sidaa aynu maanta u kala tagnay ee aynu u kala fogaanay ayaa in badan oo inala mid ahi u kala fogaadeen, kuwo kale oo badanina ay isugu soo dhawaadeen. Mana aha in aynu canaanano nafteena, ama imtixaano waayo waa qadar Illaahay.
Wallaal hadiyada aan kuu soo diray waxay la mid tahay ta aan u diray walaashayda yar maadaama aad adiguna noqotay inantaydii saddexaad. Waxan oga jeedaa hadaynu isku weynay ama calafku iskeen sii waayay kuma aynaan kala gu'in wallaaltinimadii. Laga bilaabo imikana waxan kuu ahay wallaalkaa keliya ee aad adduunka ku leedahay. Waxanan kugula dardaarmayaa in aanad i iloobin iina xasuusnaato sidaa.
Waxaanan kuu soo diri doonaa hadba sida uu yahay waayahaygu adiguna sidoo kale ayaan kaa warsugayaa in aad iigu soo dirto, wixii kula soo darsa. Sidaa iyo Nabad Gelyo.
Haddii aynu halkaa ku dhaafno sheekada qaybteedii ama wajigeedii hore, bal aynu eegno afar sanno ka dib, waxa ay ku dambaysay sheekada Subeer iyo Salma.
Su’aasha xiisaha leh ee ayu af-joogta uga dhigayno wejiga labaad ee sheekada waxay tahay afar sanno ka dib Subeer iyo Salma waa sidee muuqaalkooda nololeed, muxuuse ku dambeeyey waaya-hoodii jaceyl?
Muddo ilaa sannad gaadhaysa markii ay Salma dalka ka sii maqnayd ayuu Subeerna u dhoofay dalka Baakistaan, halkaas oo uu u tegay waxbarasho, balse Subeer sababaha ku kelifay inuu waxbarasho dibadeed doonto, waxa ugu badnaa reerkooda oo ku khasbayey inuu guursado gabadh ay u soo xuleen, maadaama uu ku guuldarraystay sahankiisii, muddona laga sugayey inuu guursado. ka dibna wuxu Subeer cadaadiska reerkooda kaga yimi kaga mar marsiinyooday inuu doonayo waxbarasho Jaamacadeed.
Subeer, wuxu ka soo laacay saddex sanno iyo badh waxbarasho Jaamacadeed ah, isaga oo soo bartay cilmiga dhaqaalaha.
Ka dibna wuxu ku soo guryo noqday dhulkiisii hooyo iyo gurigoodii.
Subeer muddadii uu Jaamacadda ku jiray ma badnayn xidhiidhka wada hadal ee dhexmaray isaga iyo Salma, waxayna wada hadleen ama xidhiidh dhexmaray in ka yar toban goor, iyadoo ay sababtuna ahayd dhinaca Salma.
Subeer markii uu Baakistaan ka soo laabtay garoonka diyaaradaha Hargeysa ku soo dhoweeyey waalidkii iyo walaalihii oo in ku dhow saddex saacadood ku sugayey, waxaana loo soo daadihiyey gurigoodii.
Subeer waxa ka muuqday dareen waxoogaa jimcoon iyo muuqaal aan ku didinayn oo yara laaban, iyadoo ay aqoontii u soo bartayna ku soo kordhisay bisayl maskaxeed iyo garaad waayeelnimo.
Hase yeeshee haddii aynu dhinaca Salma eegno iyo halka ay xaaladeedu ku dambaysay muddadaa ka dib.
Salma waxay indho ku daraan dartay dhaqankii iyo noloshii ay ugu tagtay dunida reer Galbeedka, waxayna si hawl yar u ilowday waayihii nololeed iyo xushmadii caashaq ee ay maalmo badan la soo wadaagtay Subeer.
Salma saddex bilood oo keliya markay joogtay Jarmalka ayey aqal gashay, waxay oori u noqotay inaabtigeed Mursal.
Marar dhawr ah oo uu Subeer telefoon kula hadlay Salma, waxay ugu jawaabtay, “Hadda meel baan ku deg degsanahaye, anigaa telefoonka kugu soo celin doona.”
Salma waxay noqotay qof ay dareenkeeda ka baxday xusuustii Subeer iyo wacadkii u yiilay, iyada iyo Subeer.
Mursal wuxu hore u qabay gabadh Jarmal ah oo laba carruur ah u dhashay, balse ay is fureen sannado ka hor.
Labada carruur ah ee ay Mursal u dhashay gabadha Jarmalka ahi waqtigaa waa dad waaweyn, waxayna muddo ka dib markii uu aabahood Salma guursaday ka shaqeeyeen sidii ay aabahood iyo hooyadood isugu celin lahaayeen. taas oo ay labada waalidba cadaadis badan ku sareen, aakhirkiina way isku noqdeen Mursal iyo gabadhiisii hore ee uu furay oo mar kale ayey isu noqdeen nin iyo ooridii.
Hase yeeshee dib isugu noqoshada Mursal iyo gabadhiisii hore waxay keentay inay Salma lumiso kalsooni badan oo ay markii hore ninkeeda ku qabtay, waxaana bilaabmay madmadow iyo qardoofooyin hor leh oo dhexmara Salma iyo odaygeedii Mursal.
Waxay arrintu socotaba markii ay Mursal iyo Salma muddo labo sanno gaadhaysa isqabeen oo aanay weli wax ubad ah isu dhalin ayey maalin dudmo ku kala tageen.
Salma iyo inaantigeed markii ay muddo kala maqnaayeen oo ay xaaladoodu sii xumaatay, balse aanay isfurin ayey gabadhii Salma go’aansatay inay waxbarasho bilowdo, waxaanay gashay Mac-had lagu barto xirfado kala duwan.
Sidii aynu horeba u soo sheegnay Salma waxay ahayd gabadh Illaahay ku manaystay qurux oo boqol lagala baxo, gaar ahaan waxay ahayd qof Illaahay siiyey dherer iyo laxaad.
Salma gelinka hore waxay tegi jirtay Mac-hadka, gelinka dambena waxay tegi jirtay meel lagu jimicsado, isla markaana lagu ciyaaro kubadaha gacanta, laliska iyo ta koleyga.
Salma waxay xiisaysay ciyaaraha kubadda gacanta, ka dibna si tartiib tartiib ah ayey u baratay ciyaaraha kubbada gacanta ilaa ay ka mid noqotay hablaha ugu cad cad ee naadiyada xaafadahooda u ciyaara kubbada koleyga.
Salma maadaama ay ahayd gabadh dheer oo jalaqsan, waxay indhahooda soo jiidatay dadka ka shaqeeya tartanka lagu xayeysiiyo dharka faashinka loo yaqaan.
Sidaa daraadeed waxay dhawr goor ka qayb gashay goobo lagu qabtay tartanka quruxda dharka oo dalka Jarmalka ah.
Salma tartanka quruxda dharka kama gelin kaalmaha sar sare, haddana waxay noqotay qof ay dadkii daawaday aad ugu majeerteen qurux badnaan, gole joog, wanaag iyo firfircoonaan.
Salma waxay noqotay qof u banbaxday hawlaheeda gaarka ah, haddii ay tahay dhinac waxbarasho iyo haddii ay tahay hawlaheeda dhinaca ciyaaraha, waxayse mar mar soo booqataa hooyadeed Ruun oo hadda caafimaadkeedu aad u wanaagsan yahay, kuna talaabsata lugaheeda, halkii ay awal dhulyaal ahayd, iyadoo ay hooyo Ruun dhakhaatiirtu u sheegeen inay muddo baxnaano ahaanayso, dalkana aanay ka bixi Karin ilaa inta si kama dambays ah loo hubsanayo xaaladdeeda caafimaad.
Hooyo Ruun raali kuma ah sida ay gabadheedu u dhaqmayso. Hase yeeshee ma qaadi karto wax talaabo ah, waayo waxay cid walba ka awood badan sharciga dalka u yaal oo dhigaya inuu qofku xor u yahay waxa uu rabo, isla markaana aanay cidina ku khasbi Karin wax aanu rabin.
Salma inkasta oo aanay gaadhin halkii ugu xumayd, haddana waxa in badan ku milantay dhaqanka reer galbeedka, gaar ahaan dalka Jarmalka ee ay ku nooshahay, taas oo keentay inuu isbeddel weyni ku dhaco dhaqankii iyo dabeecadii qofnimo ee Salma, marka la isu eego noloshii dhulkeeda hooyo iyo nolosheeda Jarmalka.
Salma oo awalba ahayd gabadh qurux u dhalatay, haddii ay tahay dherer, dhumuc iyo midab casaan oo ah mid jinniyad leh, ayaa haddana waxa quruxdeedu taageero ka heshay nolosha wanaagsan ee ay kala kulantay dalka Jarmalka, taasina waxay keentay inay Salma muuq iyo midaba u ekaatay dadka ay la nooshahay ee reer Jermani.
Sidaa darteed Salma qofkii yiqiinay dirqi ayuu ku garanayaa.
Salma hooyadeed muddo ka dib ayey dhakhaatiirtu ku sameeyeen hubin caafimaad, waxayna dhakhaatiirtu hooyo Ruun u sheegeen inay bogsatay, sidaa darteed ay ku noqoto dalkeeda maadaama ay ka bogsatay xannuunkii loo keenay dalka Jarmalka.
Hooyo Ruun oo aad uga werwersan xaaladda gabadheeda waxay ka fekeraysaa sidii ay inanteeda u soo kaxayn lahayd ee ay ugu celin lahayd dalkeedii hooyo, uguna gayn lahayd aabaheed.
Hooyo Ruun iyo Mursal, waxay isla gorfeeyeen sidii Salma loogu celin lahaa maadaama aanay Mursal-na u jeedin, hooyo Ruuna ay tegayso, iyaga oo ka walaacsan waxa uu Salma mustaqbalkeedu ku dambayn doono.
Dabadeed hooyo Ruun, ayaa galabtii dambe u yeedhay gabadheedii ay ku curatay, kuna dhalmo daysay ee Salma, waxayna ku tidhi: “Hooyo maadaama aan bogsaday dalkii iyo dadkiina aynu muddo dheer ka soo maqnayn waxa loo baahan yahay, in aynu mar dalkii dib ugu laabano oo aynu muddo soo joogno, dabadeedna aabana soo kaxayno oo aynu soo wada noqono.
Hooyo Ruun weedhahan way ku khiyaamaynaysaa gabadheeda, waayo waxay rabtaa inay meesha ka saarto, hadhowna marka ay dalkii tagto loo taliyo.
Salma waxay hooyadeed ugu jawaabtay: “Hooyo anigu tegi maayo oo hawlo badan baa ii socda ee adigu iska tag mar kale ayaan kaa daba imanayaaye.”
Hooyo Ruun, taa ma yeelin ee waxay gabadheedii cadaadis ku saartay inay raacdo.
Salma waxay dhego adaygtoba markii ay islaantii ka tegi wayday ee ay marba dib uga dhacdo waqtigii ay tegi lahayd ayey Salma markii dambe oggolaatay inay muddo saddex bilood ah soo joogto dalkii, ka dibna dib ugu noqoto Jarmani.
Sidaa darteed Salma iyo hooyadood Ruun, waxay u diyaar garoobeen safar dhulkoodii ah, Mursal iyo Salma xaaladoodu kama soo rayn, sidii ayeyna u kala maqan yihiin, walise ismay furin, laakiin Mursal iyo Eddadii Ruun way is ogyihiin oo qaddiyada Salma way ka tashadeen.
Sidaa awgeed Mursal isaga ayaa qaban qaabinaya ambabaxa Ruun iyo gabadheeda.
Maalintii dambe ayuu Mursal goor aroor hore ah Eddadii Ruun iyo gabadheedii Salma geeyey Garoonka diyaaradaha, wuxuna ku hubsaday diyaarad toos u tegaysa madaarkii ay ka soo duuleen ee Hargeysa, waxayna maalintii dambe Salma iyo hooyadeed ka soo degeen madaarka Hargeysa, waxaana garoonka kaga hor yimi Xaaji Abtidoon oo ah Salma aabaheed iyo Ruun odaygeedii.
Sidaa awgeed Salma iyo hooyadeed waxay yimaadeen gurigooda oo ay ka maqnaayeen muddo afar sanno gaadhaysa.
Salma waxay dib ugu soo laabatay dhulkeedii hooyo iyo gurigii hooyadeed.
Subeer inkasta oo ay Salma xumaysay oo ay xadhiga u jartay markii ay Yurub tagtay, haddana qalbigiisa kama ay maydhmin muxubadi iyo xusuustii kalgacalkii gaamuray ee uu u hayay Salma.
Laba maalmood ka dib imaatinkii Salma ayay Subeer gabadh walaashii ah u sheegtay inay Salma timi, waxayna ku tidhi: “Wallaal gurigii reer Abtidoon waxa yimi Salma iyo hooyadeed oo Jarmalka ka yimi."
Subeer inkasta oo ay meeli yara damqatay, haddana markii loo sheegay warka Salma dareenkiisa wax weyni iskama beddelin, waayo wuxu ogaa in aanay Salma maanta waxba ugu filnayn oo Jarmalka lagu guursaday oo ay nin kale ooridii tahay, isla markaana Subeer ma oga in Salma iyo Mursal aanay xaaladoodu wacnayn.
Salma markii ay saddex maalmood joogtay ayay oggaatay inuu wiilkii Subeer magaalada joogo, isla markaana aanu weli guursan.
Hase yeeshee Salma ma hayso weji ay Subeer ku hortagto oo xataa inay soo salaanto way ka weji gabaxday, waayo wixii ay fashay ayay ogtahay, waxayna aaminsan tahay inuu Subeer colaad iyo calool xumo u hayo. balse Subeer isagu sidaa si ka duwan ayuu u fekerayay, mana aaminsanayn inay ka gashay dembi sidaa u weyn, laakiin wuxu u arkaa inuu calafku yahay wax qoran oo aan meelna laga dhaafi Karrin.
Sidaa darteed uu Mursal yahay ninkii ay Salma calafka isku lahaayeen, calafkuna uu waxba kama jiraan ka dhigay waayihiisii caashaq iyo riyadiisii tabitaanka Salma.
Subeerna inkasta oo ay weli xusuusta qalbigiisa ku laaqan tahay muxubadii iyo kalgacalkii ay Salma ku beertay, haddana qalbigiisu xiisaha Salma wuxu ugu dhololayaa sidii uu maalmo ka mid ah waayihiisii caashaq ugu dhololi jiray.
Guul-daradii uu Subeer kala kulmay caashaqii uu beeray ee dhexmaray isaga iyo Salma, waxay qalbigiisa ku beertay bayr iyo didmo uu ka qabo dhinaca haweenka.
Sidaa darteed Salma, ka dib gabadh kale dibnihiisa uma kala furin, marka lala soo hadal qaadana waxa qalbigiisa damaqda xusuusta jacalykiisa lafaha guray iyo siduu faro madhan uga joogo beertii caashaqa ee uu maalmo badan dhiigiisa ku waraabiyey.
Subeer marar badan ayuu aabihii u soo jeediyey inuu guursado oo uu ku yidhi: “Aabbo guurso." laakiin marmarsiinyo iyo marba horta arrin baan soo qabsanayaa ama inoo soo qabanayaa Aabbo ayuu cudur daar uga dhigi jiri diidmadiisa.
Waxyaalaha uu Subeer odayga aabbihii ku qancin jiray waxa ka mid aha hindisayaal la xidhiidha hawlahooda ganacsi, wuxuuna marba soo bandhigi jiray qorshe uu ku horumarinayo hawshooda ganacsi, taas oo uu odayguna u guuxi jiray, waayo qorshe kasta oo uu Subeer ku soo kordhiyo hawsha ganacsigooda, waxa uu noqdaa mid laga dhaxlo horumar iyo koboc dhaqaale, taas oo keentay inay yeeshaan shirkad weyn oo keenta ama soo dejisa allaabta dhismaha.
Subeer inkasta oo uu maqlay inay Salma timi, haddana uma tegin, waayo maadaama aanay oori u noqonayn, wuxu is yidhi, yaanay aragtideedu kugu soo kicin hurgumo kaa legdan iyo dookh aad la dheelido.
Ta kale, wuxu waxoogaa walaac ah ka qabay in Salma, haddii ay doonto ay salaantaba ka qaadi waydo, maadaama ay ka danaysatay Subeer iyo waayihiisa caashaq, sidaa darteed dareenka noocaas ahina wuxu ka mid yahay waxyaalaha Subeer ka walaaciyey inuu Salma soo booqdo.
Hase yeeshee Salma markii ay joogtay muddo labaatan cisho gaadhaysa ayay maalintii dambe go’aansatay inay Subeer salaanto, kuna tidhaahdo, “Wallaal iska kay cafi, waxayna hoos ugu xashaashaqday oo tidhi, “Alleylehe wixii dhacayba dhece’e waa inaan Subeer u tagaa oo ku idhaahdaa wallaal iska kay cafi oo aynu noqono dad wallaalo ah, maadaama aynu kala fogaanay oo uu gidaar weyni inoo dhexeeyo hadda.”
Salma aad bay u yiqiinsan tahay inay Subeer xumaysay oo ay godob ka gashay, sidaa darteed markii ay dib u soo noqotay ee ay u timi meel ay uga baxayso sanqadha Subeer, waxay taasi dareenkeeda ku beertay damqasho badan, waayo waxa nafteeda ku beermay waxoogaa tiiraanyo ah, taas oo ay xusuusteedu la waalalowday sidii ay Subeer u xumaysay.
Salma markii ay go’aansatay inay Subeer u tagto ayay waxoogaa ka fekertay qaabkii iyo meeshii ay ugu tegi lahayd.
Hase yeeshe maalintii dambe ayay goor galab ah intay si la yaqaan u soo lebisatay, waxay isa soo hoos taagay geedkii uu ubax-dhiga jacaylkoodu ka bilaabmay afar sanno ka hor.
Geedkaasi wuxu ahaa geedkii ay ku ballami jireen mar kasta oo ay kulmayaan, wuxuna geedkaasi ku yeelaa meel u dhow guryahooda, gaar ahaan wuxu ku yaal meel loo maro bakhaarada Subeer aabihii marka laga tago guriga Subeer reerkooda.
Salma markii ay muddo ilaa 40 daqiiqo ah hoos taagnay geedkii ayuu Subeer markii dambe ka soo baxay gurigooda, isaga oo u socda Xafiiskii shaqada.
Subeer markuu guriga ka soo baxay wuxu gacanta ku sitay dhawr xabbo oo buugaagta xisaabaadka ah iyo shandad gacmeed nooca waraaqaha lagu qaato ah, wuxuna ku lebisan yahay surwaal madow iyo shaadh cad, isla markaana wuxu galabtaa doonayaa inuu xidho xisaabaadkii bisha iyo inuu mushaharooyinkii u diyaariyo shaqaalaha, maadaama ay bishii dhammaatay, iyadoo ay shirkadoodu noqotay shirkad ballaadhan oo dalka intiisa badan laamo ku leh, ayna gobolada u joogaan wakiilo iyo dad shaqaale ahi.
Salma waxay taagnaato oo ay Subeer bidhaamiso bal inuu guriga ka soo baxay iyo inkale ayay markii dambe si lama filaan ah isha ugu dhufatay Subeer oo guriga ka soo booday, ka dibna cagta soo saaray waddo hoos marta geedka ay hoos taagan tahay.
Muuqaalka Subeer wuxu dareenka Salma ku riday khal-khal iyo baxaadeg, wuxuuna dareenkeeda maskaxeed tusay sawiro badan oo is-dhexqaadaya, mar way naxday oo waxay is tidhi tolow mayska dhaqaaqda oo ma ka dhuumataa, marna waxay keentay farxad oo waxay xusuusatay aayaamihii wacnaa ee waayaha jacaylka iyo sidii uu qalbigoodu isugu soo muhan jiray iyada iyo Subeer, marka ay ballanta ku leeyihiin geedka ay hoostaagan tahay, ka dibna waxay isku qancisaa ha ka dhuumane sug oo salaan.
Shucuurta Salma kor iyo hoosba waxa hadheeyey daruuro walaac ah, waxa korkeeda ka soo booday dhidid buurbuuran.
Hiinraaga feedhaheeda ka baxayna, waxaad moodaa in boqol mayl la soo baacsaday, waxay ku waalatay dhaqaaq joogsi, waxayna xaaladeedu ka dhignayd, “Ma tagtaa, ma joogta, weli waan talamayaa.”
Subeer wuxu soo socdaa meel qiyaastii noqonaysa kala badhka guriga iyo geedka dhexdooda, guriga iyo geedkuna waxay isku jiraan wax aan boqol tallaabo ka badnayn.
Sidaa darteed haddii aanay Salma meesha ka dhaqaaqin labo daqiiqadood ka dib ama ka yarba iyada iyo Subeer way ishuran yihiin, laakiin gabadhii Salma qaybta jawaab celinta ee maskaxdeeda ayaa khal-khashay oo joogid iyo tegis midna ugu talin weyday, waxayna ku waalatay, “Tolow ma iska tagtaa, mise waad iska joogtaa.”
Subeerna kaabiga ayuu u soo saaran yahay, Salmana weli may go’aansan inay meesha ka dhaqaaqdo oo Subeer ka dhuumato iyo inay calool-adaygto oo ay iska sugto.
"Cajeb, tolow maxay noqon" Salma waxay geedka hoostaagnaataba oo ay wejigabax la caloolyowdaba, waxay aakhirkii go’aansatay inay u babac dhigto wejiga Subeer.
Salma sidii dembiile la qabtay hoosbay u foorartay, Subeerna waa ku soo dhowyahay laakiin Subeer maskaxdiisa kuma jirto Salma ayaa geedkan hoostaagan ama kuu imanaysa, sidaa daraadeed bannaan ayuu iska socdaa oo ma aha ninka burkaba bahal ka filaya.
Hase yeeshee markii uu marayey meel la guudboon halkii ay Salma taagnayd oo saddex afar tallaabo u jirta ayuu dhanka bidix jaleecay, mise wuxu isha ku dhuftay qof dumar ah oo aanu wejigeedu ku cusbayn, dabadeedna isaga oo hooska iska weydiinaya, “Qofkan aad wejigiisa garanayso ee meesha taagani, muxu ahaa,” ayuu niyada iska yidhi.
Salma hoos bay u foorarsatay oo indhaha may siin karayn Subeer, laakiin markii uu istaagay ayay soo eegtay, iyadoo uu wejiga gabaxweyni ka muuqdo, balse eegmo mooyaane wax hadal ahi Salma kama soo bixin.
Subeer wuxu gartay in qofka meesha taagani Salma tahay, ka dibna xaggeedii ayuu u soo dhaqaaqay isaga oo yaaban, laakiin markii uu ilaa saddex tallaabo u soo jiray ayuu istaagay, intii aanu midna mid la hadlin ayay Salma indhaha sacabka saartay, si ay isaga masaxdo ilmo buurbuuran oo ka soo yaacday.
Salma markii ay ilmadii iska yara masaxday ayey hadal u hollatay, waxaana afkeeda ka soo baxay, “Wallaal Subeeroow waan ogahay in aan gef iyo godoba kaa galaye iska kay cafi, walaashaa oo kale ayaan ahaye.”
Dareenkii firkanaxa ahaa dartii ayaa xataa salaantii laga booday.
Sidaa darteed markii ay Salma weedhaa ku tiraabtay ayuu Subeerna ugu jawaabay: “Salmaay wax dembi ah ma lihid, waxa dhacayna waxay ahaayeen waxa hore u qornaa, aniguna wax xumaan ah kuuma hayo, markaa arrinta iska ilow oo bal iiga waran xaaladdaada reernimo hooyadaase waa sidee? Xaaladeeda caafimaad ma soo bogsatay?”
Weedhaha Subeer ka soo yeedhay aad bay u damqeen qalbiga Salma, waayo waxay Subeer kala kulantay dareen aanay ka filayn, aadbayna ula yaabtay iimaanka qaniga ah iyo samir wanaaga ku sugnaaday Subeer.
Haddalada Subeer ku tiraabay waxay dareenka Salma ku sii kordhiyeen culays saa'id ah, taas oo keentay inay tiiraanyo darteed hadalba soo rogan waydo oo ay hoos isaga foorarsato, marna wejiga Subeer ku dheygagto.
Subeer markuu arkay inay gabadhii Salma dhibaataysan tahay oo uu hadalba ka soo bixi wayey, ayuu haddana ku yidhi: “Wallaal Salma is-deji, hana ka tiiraanyoon wixii dhacay, waayo dunida wax kastaa way ka dhacaan, adiguna dembi kuma lihid wixii dhacay, aniguna calool xumo kuuma hayo.”
Subeer markii uu wedhahaa caqli celinta iyo dejinta ah Salma u jeediyey, ayuu hore uga sii socday, wuxuna yidhi: “Salmaay wallaal waxaan ku weydiiyey imisa carruur ah ayaa Mursal u dhashay.”
Subeer ma joojin hadalka, wuxuna su’aasha ku sii xigsiiyey: “Alla ninka aad carruurta u dhashay nasiib badanaa, Salmaay koley caruurtaadu waa kuwo qurux badane, goormaad I soo tusi, waxaan doonayaa inaa arko’e?”
Subeer wuu sii hadlay, wuxuna haddana yidhi: “Salmaay mar haddii uu calaf ii kaa diiday, waxa aniga iga nasiib badan ninka aad ooridiisa noqotay ee aqal kugula hoyda, ubadna aad u hayso?"
Salma intay hoos u foorarsatay ayay aamus miciinsatay, laakiin Subeer markuu arkay inay gabadhii Salma ka didsan tahay oo ay hadliba kari weyday oo ay wax heleen, ayuu yidhi: “Waxaad yeeshaa telefoonkaygaan ku siinayaaye ila soo hadal, marka aad fursad u hesho si aynu isu waraysano.” isagoo isku dayaya inuu khajilaadan, xishoodkan faraha badan ee ku habsaday Salma maaro u helo, taas oo ay teleefanka iska weydiin karaan, kana wada sheekaysan karaan, si ka duwan sidan ay hadda isu hortaagan yihiin ee keentay xishoodka iyo firkanaxa.
Salma may siin wax jawaab ah, waxayna dhexgashay duni-tiiraanyo, laakiin Subeer intuu telefoonkiisii warqad yar ku qoray ayuu farta ka saaray Salma, ka dibna wuu ka dhaqaaqay, waayo haddii uu Salma la sii joogi lahaa waxa ka baylihi lahaa hawl maalmeedkiisa ahayd, dhinac wuxu ku degdegayay hawshii xafiiska u taalay, dhinacna wuxu is leeyahay armaa lagu yidhaahdaa maxaa ninka maantoo dhan la taagay gabadha xaaska ah ee la qabo.
Subeer iyo Salma waxay ku kala tageen ballan qarbo qarbo ah, waxayna goobtii ku kala dhaqaaqeen, iyadoo aanu qofna qofka kale hadalka deeqsiin karayn.
Hase yeeshee labadoodu way sii kala daraayeen, waxayna qoontu ku sii xumayd Salma oo ay tiiraanyadu qalbigeeda aad u damaqday, taas oo ay aad u xusuusatay godobtii jaceylka ee dhexmartay iyada iyo Subeer.
Sidoo kale Subeer laftiisu inkasta oo aanu la mid ahayn Salma, haddana kulanka lama filaanka ah ee dhexmaray isaga iyo Salma ee ay la hortimi ayaa waxoogaa dacar ah ku kiciyey shucuurta Subeer, wuxuna meesha ka dhaqaaqay, isaga oo ka fekeray xaaladda Salma.
Ballanta keliya ee uu Subeer kaga tegay Salma waxay ahayd, isagoo siiyey Telefoonkiisa guriga, ka dibna ku yidhi telefoonkaa igala soo xidhiidh.
Galabtii ay kulmeen habeenimadeedii ayey Salma 9:00-kii caweysnimo dultagtay telefoon qolkeeda huradada yaalay, waxayna garaacday telefoonkii uu siiyay Subeer ee uu yidhi igala soo hadal.
Telefoonka Subeer, wuxu yaal qolkiisa, laakiin waqtiga ay Salma telefoon soo garaacday waxa qolka Subeer dhexjoogta gabadh ay Subeer wallaalo yihiiin oo hag-hagaajinaysa cashadiina u dhigaysa.
Markii uu telefoonkii soo dhacay ayey Subeer wallaashii qaday oo tidhi: “Hallo, waa ayo." Salma ayaa tidh: “Wallaal, waa aniga ee Subeer ma joogaa, Subeer baan doonayaayee.”
gabadhii Subeer walaashii way yaabtay, waayo weligeed may arag gabadh Subeer Telefoon u soo diraysa, waxayse gabadhii ugu jawaabtay, si xishmad iyo qederin ka muuqato waxayna ku tidhi: “Wallaal ma joogo laakiin wuxu imanayaa 30-daqiiqo ka dib.”
Salma way dhigtay telefoonkii, waxayna tidhi, “Waayahay wallaal mahadsanid.” Salma muddada soddonka daqiiqo ahi way ku dheeraatay, waayo ladhbaa ku kacsan, laakiin marka ay teleoonka garaacayso Subeer ma foga ee wuxu wiil saaxiib yihiin la taagan yahay meel gurigooda hortiisa ah oo aanay masaafadeedu ka badnayn dhowr tallaabo.
Hase yeeshee, ilaa nusa-saaco dambe ayuu Subeer la sii taagnaa wiilkii uu la joogay, wuxuna soo galay guriga. Waxa kulmay Subeer oo albaabka afkiisa soo socda iyo qalalowda telefoonka markaa soo dhacay.
Subeer intaanu meel kale eegin ayuu telefoonkii haab haabtay oo kor u qaaday, markuu dhegta saaray telefoonkii wuxu maqlay cod dumar oo leh “Halloo”, wuxuuna ugu hal celiyey: “Waa tuma,”. Salma ayaa si deg deg ah ula soo booday hadal aad moodo in firkanax ku jiro, waxayna tidhi: “Wallaal waa Salma ee iska Waran.”
Subeerna wuxu ugu jawaabay, “Wallaal waan fiicanahaye, adigu iska waran.” Weedho salaan ah markii la isu celiyey ayay Salma hadalkii qaadatay, waxayna tidhi: “Wallaal Subeerow
Guled Abdi Sheehaash - SDWO Chief Editor